ပုံကို ဒီနေရာက ယူသည်။
ချယ်ရီကို ပန်း လို့သဘောထားသူတွေကို
Posted by pandora at 12:09 AM
Beautiful poem! Don't you think the flowers in the picture are magnolia.
နဲနဲ မြင်.သလားလို.ပန်ဒိုရာ .တို.ဘဲ နိမ်.နေသလား။ လိုက်မမှီ နားမလည်ဘူးဖြစ်တယ်။ ဖတ်ပြီးစဉ်းစားတယ်။ မရဘူး။
ကဗျာက အခါပေး ဖတ်နေရသလိုပဲ ဟိ ...
Dear Anonymous, Thanks. I have got the pic fromafriend of mine. Now I have change it toanew one which may be clearer. :)
မခင်ဦးမေ ကိုစိုးထက် ကျေးဇူးပါ။
တခုခုကို သင်္ကတဆန်ဆန် နမိတ်ပုံပေးထားတယ်ဆိုတာတော့ သိတယ်။ဘာလဲ သေချာမသိဘူး :) ၀မ်းစာဟောက်ပက်နဲ့ လက်ကုန်နှိုက်ချင်လို့မရဘူးဆိုတာ သိသွားပီ အရီးပန်ရေ :)
ဒီလိုဆိုရင်ဖြင့် ကျနော် မဆက်စပ်တတ်လေဘူး
ချယ်ရီကို မြင်ရ ...။
ချယ်ရီဟာ ချယ်ရီမကတဲ့ အနက်ကို
ဘ၀ကို တမနက်စာ ကျေနပ်မိ ... ။
ချယ်ရီဆိုတာ တမလွန်ကို ထွက်ခွာ သွားပြီဖြစ်တဲ့
၈၈ ရဲ့ ပန်းတပွင့်..
သူ့ဘ၀ ဇာတ်ကြောင်း ကဗျာတွေ စာတွေ သီချင်းတွေ လဲ ရေးခဲ့ကြတာပဲ...
အမတော့ ခု ချယ်ရီကို ချယ်ရီဟာ ချယ်ရီမကတဲ့ အနက်တွေနဲ့ ဘာသာပြန်မိတယ်...
သိပ်မပေါက်ဘူးးး) ချယ်ရီက ချယ်ရီမကတော့ ရီချယ်လား ဒေါ်လေး ရ :D
ချယ်ရီက ပန်း သာ မက အသီးလဲ ဖြစ်သေးတယ် ဆိုတဲ့ သဘောလား ဟင်
ချယ်ရီကို အပြင်မှာအမြင်ဖူးပေမယ့် ပုံလေးတွေ့ ရတာနဲ့ရင်ကို ညွှတ်နူးစေလို့ 
ကိုယ့်အတွက်လဲ ချယ်ရီက ချယ်ရီမကပါဘူး…
ညိမ်းညိုရေ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ်ရေးထားလို့ ဆက်သွယ်မှုဧရိယာ ပြင်ပရောက်နေတာ ဖြစ်မှာပါ။
ဆရာဦးငြိမ်းဝေ ချယ်ရီရောင်နံနက်ခင်းဖြစ်သွားခဲ့တာ ပျော်စရာပဲ။
မခင်မင်းဇော် အဲဒီဇာတ်ကြောင်းကို မသိခဲ့ပါ။ ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပဲ အစ်မရေ။
မောင်မျိုးရေ ချယ်ချင်သလိုချယ်ပါတော့.း)
မတန်ခူးရေ ပန်ဒိုရာလည်း ရှားပါးစွာပဲ မြင်ဖူးခဲ့ပါတယ်။
ချယ်ရီဆိုတာ ဂျပန် ဒီထက်ခြုံပြောရင် အာရှပေါ့လေ သူက ဥရောပ ဆန်ဆန်လှသတဲ့လားး
PS ချယ်ရီက အပြင်မှာ ပန်းရောင် ပိုသန်းသလိုလို.. :)
ကျေးဇူးပဲ ဇီးကွက်။ အရပ်ဒေသ ကို ရည်ညွှန်းခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးမှတ်တယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် မှတ်ချက်အတွက် ကျေးဇူးပါ။
u need2say about me ....
4 that picture :)